Muzera re digital, mitemo ichava iyo inowedzera nyaya huru yekuumba tsvakurudzo. Ikozvino, mune ramangwana, isu tichatambudzika zvishomanana nezvingaitwa uye nezvimwe nezvinofanira kuitwa. Sezvo izvozvo zvichiitika, ndinotarisira kuti mitemo-yakagadziriswa yemasayendisiti ezvesuzhinji uye nzira yakarurama yekutsvaga dhemasayendisiti ichashanduka kune chimwe chinhu chakafanana nemitemo-yakaswedera yakanotsanangurwa muchitsauko 6. Ndinotarisirawo kuti semitemo inowedzera kuve pakati, ichati kukura sehurukuro yekutsvakurudza nzira. Muzvakafanana nenzira iyo vatsvakurudzi vezvemagariro evanhu zvino vanopa nguva uye simba pakuvandudza nzira itsva dzinoita kuti zvigadziriswe uye zvakajeka zvingatarisirwa, ndinotarisira kuti tichazoshandawo kukudziridza nzira dzinowirirana nemitemo. Kuchinja uku kuchaitika kwete kwete nokuti vatsvakurudzi vanochengeta mitemo semagumo, asiwo nokuti vanofarira maitiro evanhu senzira yekuita tsvakurudzo dzevanhu.
Muenzaniso uyu muitiro ndiko kuongorora differential oga (Dwork 2008) . Fungidzira izvozvo, somuenzaniso, chipatara ine marekodhi akawanda ezvehutano uye kuti vatsvakurudzi vanoda kunzwisisa marongerwo aya data. Kusiyana kwehurongwa hwekushandura humwe hunoita kuti vatsvakurudzi vadzidze nezvehuwandu hwemaitiro (semuenzaniso, vanhu vanosvuta vanowanzove nekenza) nekuderedza dambudziko rekudzidzira chero chinhu pamusoro pemamiriro evanhu. Kubudirira kwezvinhu izvi zvehuga-kuchengetedza zvigadziriswe zvakave nzvimbo inoshingaira yekutsvakurudza; ona Dwork and Roth (2014) yehutano hwehurefu hwebhuku. Differential privacy ndeyemuenzaniso wekutsvaga munharaunda kutora mhando yezvetsika, kuishandura kuva purojekiti yekutsvakurudza, uye zvino kufambira mberi kwayo. Uyu ndiwo muenzaniso wandinofunga kuti tichawedzera kuona mune dzimwe nzvimbo dzekutsvaga kwevanhu.
Sezvo simba revanotsvakurudza, kazhinji kubatanidzwa nemakambani nehurumende, richiri kukura, richava rakaoma kukudzivisa nyaya dzakaoma dzakanaka. Izvo zvave zviitiko zvangu zvokuti vazhinji masayendisiti ezvesuzhinji uye masayendisiti ezve data vanoona nyaya idzi dzetsika semusande kuti idzivirire. Asi, ndinofunga kuti kudzivisa kunowedzera kusanzwisiswa sechirongwa. Isu, senharaunda, tinokwanisa kugadzirisa matambudziko aya kana tikasvetuka mukati uye tivashandise nehutano nemabasa atinoshanda kune mamwe matambudziko ekutsvakurudza.